Dadkii isticmaalay FaceApp oo ‘war naxdin leh loo sheeg |
Dadkii isticmaalay FaceApp oo ‘war naxdin leh loo sheeg
Hay’adda dambi baarista federaalka Mareykanka ee FBI-da ayaa sheegtay in adeegga FaceApp iyo kuwa noociisa ah ee lagu sameeyay waddanka Ruushka ay sababi karaan “khatar weyn oo dhinaca sirdoonka ah”.
Warka kasoo baxay hay’adda FBI-da ayaa yimid xilli Mareykanka iyo meelo kale oo caalamka ka mid ah uu ka taagnaa walwal la xiriira khatarta amni ee ka dhalan karta teknoolojiyadda ay adeegsadaan waddamada dibadda.
Warqadda loo diray Mr Schumer, ayey hay’addu ku tiri; “waxay arrintan khuseysaa barnaamij kasta oo telefoon lagu soo dajisan karo ama wax kasta oo noocaas ku saabsan oo lagu farsameeyay gudaha Ruushka, sida FaceApp, waxaana laga yaabaa inay keenaan halis dhinaca sirdoonka ah”.
Mas’uuliyiinta barnaamijka caan baxay ee FaceApp ayaan wali ka jawaabin codsi aan ugu dirnay inay ka hadlaan arrintan.
Sharcidajiyeyaasha Mareykanka, oo uu ka mid yahay Mr Schumer, ayaa bishii October dalbaday in hay’adaha sirdoonka ee waddankaas ay sameeyaan tijaabooyin la xiriira khatarta ay adeegga TikTok iyo kuwa kale ee laga leeyahay Shiinaha ku keeni karaan amniga qaranka.